फुटका कारण ढल्यो एमालेको गण्डकी प्रदेश सरकार – समाचार विशेष
फुटका कारण ढल्यो एमालेको गण्डकी प्रदेश सरकार
By समाचार विशेष संवाददाता	 On २०७८, २७ जेष्ठ बिहीबार २०:१६
काठमाडौं । नेकपामा आएको फुट र एमालेमा देखिएको घरझगडाले अन्ततः एमालेको नेतृत्वमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकार ढलेको छ । संविधानको धारा १६८(३) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आजै पदमुक्त भएका छन् । अब संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । अब प्रदेश प्रमुख सीता पाैडेलले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेशसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यलाई आह्वान गर्नेछिन् ।
सुदूरपश्चिममा एमालेभित्र कार्वाहीको लहर
बाँसगढीमा भयानक सडक दुर्घटना, एक जना बालक गम्भिर घाईते!
भारतीय सीमामा तारबार गर्नुपर्छ-सभासद तारालामा तामाङ
सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध एमाले पुनरावलोकनमा जाने
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल को हुन?
नागरिकता अध्यादेश रोक लगाउने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लाउनुपर्ने भनाई
भारतीय सीमामा तारबार गर्नुपर्छ-सभासद तारालामा तामाङ २०७८, २७ जेष्ठ बिहीबार २०:१६
‘म किन गरीब ? ’ भन्ने प्रश्नमा बुद्धले दिएको यस्तो जवाफ सुन्दैमा धनी बनिन्छ २०७८, २७ जेष्ठ बिहीबार २०:१६
छुटेका कानून व्यवसायीहरुलाई कोरोनाको दोश्रो डोज २०७८, २७ जेष्ठ बिहीबार २०:१६
कञ्चनपुरमा अशक्त युवतिमाथी सामुहिक बलात्कार २०७८, २७ जेष्ठ बिहीबार २०:१६
सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध एमाले पुनरावलोकनमा जाने २०७८, २७ जेष्ठ बिहीबार २०:१६
२०७८, ३० जेष्ठ आईतवार १९:१४
२०७८, ३० जेष्ठ आईतवार १२:३२
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल…
२०७८, २९ जेष्ठ शनिबार २०:०५
नागरिकता अध्यादेश रोक लगाउने न्यायाधीशलाई महाअभियोग…
२०७८, २८ जेष्ठ शुक्रबार १२:०७
केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहेको पार्टी कमिटीलाई सर्वोच्च…
२०७८, २८ जेष्ठ शुक्रबार ११:१९